Nemanja Matić iyo Luke Shaw oo siyaabo kala duwan kaga hadlay shaqo ka ceyrinta Jose Mourinho – Gool FM
Nemanja Matić iyo Luke Shaw oo siyaabo kala duwan kaga hadlay shaqo ka ceyrinta Jose Mourinho
(Manchester) 24 Dis 2018. Nemanja Matić ayaa qiray in ciyaartoyda Manchester United ay qaataan mas’uuliyada, arinta ku aadan shaqo ka ceyrinta macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
.Inkastoo tababaraha reer Portugal uu khilaaf kala dhexeeyay ciyaartoy dhowr ah sida Pogba iyo Luke Shaw, hadana Matic ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu ixtiraamka badan Mourinho, gaar ahaan maadaama uu kala soo shaqeeyay kooxdiisii hore ee Chelsea.
Wargeyska “The Sun” ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay Nemanja Matić waxyaabihii uu yiri waxaa ka mid ahaa:
“Dabcan, waxaan sheegay kadib kulankii Liverpool, waa inaan qaadno mas’uuliyad, waana inaan sida ugu fiican u ciyaarnaa oo aan badinaa kulamada”.
“Ma aqaano waxa isbedelay kulankii Cardiff islamarkaana aan ugu guuleysanay 5 gool, taasi waa su’aal aysan cidna jawaabteeda heynin, waa hubaal in tani ay tahay habka ugu fiican ee aan ku socon karno, waan dagaalami doonaa waxaana isku dayi doonaa inaan sidaas sameyno”.
“Tani waa kubada cagta, xaaladahan oo kale waxay dhacaan marar qaar, waan ka war qabnaa in natiijooyinka xun aysan ahayn qaladka tababaraha”.
Dhinaca kale Luke Shaw oo isna la hadlay saxaafada ayaa wuxuu isna sheegay:
“Ma ahan wax fiican marka arimahan oo kale ay dhacaan, laakiin ciyaartoyda iyo koox ahaan waa inaan u muujinnaa ixtiraam tababaraha, dadka si dhaqso ah ayay u iloobeen wixa uu Jose Mourinho nagula guuleystay, waxaan ku guuleysanay koobab waxaana ku guuleysanay tartanka UEFA Europa League, qof walbana waa inuu ixtiraamaa”.
“Kooxaha naga soo horjeeda waxay sugayaan guuldaradeena” – mid ka mid ah xidigaha kooxda Juventus